अभियान न्यूज, Author at Abhiyan news - Page2of 115
Author: अभियान न्यूज
भारतले धारचुलाको धौलीगंगा बाँध खोल्यो
१६ असार २०७९, बिहीबार ०३:४६ अभियान न्यूजLeaveaComment on भारतले धारचुलाको धौलीगंगा बाँध खोल्यो
भारतले धारचुलाको धौलीगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोल्दा महाकालीमा पानीको तह बढेको छ । पिथौरागढस्थित धौलीगंगा पावर स्टेशनले बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म बाँधको ढोका खोल्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र पठाएको थियो । विद्युत परियोजनाको ड्याम साइटमा सिल्ट फ्लशिङ्ग हुने र सो कामका लागि बेलुकी ८ बजेसम्म बाँधको ढोका खोलिने पत्रमा उल्लेख छ […]
१६ असार २०७९, बिहीबार ०३:४१ अभियान न्यूजLeaveaComment on राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि विमलाले भनिन् -‘राजीनामा दिएकै छैन’
लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला ओलीले राजीनामा गरेको प्रदेश सरकारले बताइरहँदा उनले भने अझै राजीनामा दिइ नसकेको बताएकी छिन् । अरुको घरभित्र प्रवेश गरी अर्की महिला र उनको नाबालिग छोरीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा राज्यमन्त्री ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब रहँदै आएको थियो । ‘उहाँले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ, मैले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गरिसके’, बुधबार विमलाको […]
आज संसद् दिवस मनाइँदै
१६ असार २०७९, बिहीबार ०३:३७ अभियान न्यूजLeaveaComment on आज संसद् दिवस मनाइँदै
२०१६ असार १६ गते संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष असार १६ गते संसद् दिवस मनाउने गरिन्छ । दिवसका अवसरमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । सापकोटाले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलन र जनसंघर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गरेका छन् । सभामुखले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्,’ संसद् […]
भव्यतासाथ राष्ट्रिय धान रोपाइ दिवस कार्यक्रम मनाइयो (फाेटाेफिचर)
१६ असार २०७९, बिहीबार ०१:०१ अभियान न्यूजLeaveaComment on भव्यतासाथ राष्ट्रिय धान रोपाइ दिवस कार्यक्रम मनाइयो (फाेटाेफिचर)
नेपाल अटो रिक्सा, इ-रिक्सा तथा ठेला सम्बद्ध श्रमिक संघले भव्यतासाथ राष्ट्रिय धान रोपाइ दिवस कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पूर्व रक्षामन्त्री तथा सांसद भिमसेनदाश प्रधानकाे प्रमुख आतिध्यतामा ताकेश्वर न.पा. – ०३, जितपुरफेदीमा कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रधानले आधुनिक कृषि प्रणाली अबलम्बन गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । नेपाल अटो रिक्सा, इ-रिक्सा तथा […]
१५ असार २०७९, बुधबार ०३:३५ अभियान न्यूजLeaveaComment on बालुवाटारमा आगलागी
काठमाडौँको बालुवाटारस्थित सुनौलो परिवार नेपाल रहेको भवनमा आगलागी भएको छ । अहिले दमकलको सहायताले आगो निभाउने काम जारी छ । आज बिहान करिब ६ बजेदेखि आगलागी भएको हो । सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दमकल आगो निभाउन आएको थियो तर त्यसले काम गरेन । त्यसपछि प्रहरीको दमकलको सहयताले आगो निभाउन थालिएको छ ।
१५ असार २०७९, बुधबार ०३:०९ अभियान न्यूजLeaveaComment on आज १७ औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै
आज राष्ट्रिय धान दिवस । प्रत्येक वर्ष असार १५ गते मनाइने धान दिवस आज खेतमा काम गरी दही च्यूरा खाएर मनाइँदै छ । दिवसको अवसरमा देशभर रोपाइँ लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दही च्यूरा खान्छन् । यसबेला दही च्यूराले शरीरमा शीतलता भई शक्ति सञ्चय हुने विश्वास […]
धान दिवसको अवसरमा कर्णालीमा सार्वजनिक बिदा
१५ असार २०७९, बुधबार ०२:५४ अभियान न्यूजLeaveaComment on धान दिवसको अवसरमा कर्णालीमा सार्वजनिक बिदा
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । असार १५ गते धान दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको हो । जुम्लाबाहेक कर्णालीका नौ जिल्लामा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी असार १५ गते सार्वजनिक बिदा दिइएको जनाएको छ । प्रदेश […]
१४ असार २०७९, मंगलवार ०२:५५ अभियान न्यूजLeaveaComment on जसपाले सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउने
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ । सोमबार राति बसेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय कार्यकारिणी बैठकले सरकारमा रहेका चारवटै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । उपेन्द्र पक्षीय कार्यकारिणी सदस्यहरूको बैठकले नयाँ मन्त्री पठाउने अधिकार उपेन्द्रलाई दिने निर्णय एक नेताले बताए । कार्यकारिणीको बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष […]
१४ असार २०७९, मंगलवार ०२:४८ अभियान न्यूजLeaveaComment on एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषद् बैठक आज सम्पन्न हुने
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को प्रथम केन्द्रीय परिषद् बैठक आज सम्पन्न हुने भएको छ । यसअघि हिजो बसेको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको ३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई १२ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिदेखि आगामी कार्य योजनासम्म समेटिएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिको वर्तमान चरित्रबारे व्याख्या गरिएको छ। प्रतिवेदनमा वर्तमान राजनीतिक शक्तिलाई […]
हैजासम्बन्धी समस्या भएमा, ११८० मा फोन गर्न सकिने !
१४ असार २०७९, मंगलवार ०२:४१ अभियान न्यूजLeaveaComment on हैजासम्बन्धी समस्या भएमा, ११८० मा फोन गर्न सकिने !
काठमाडौं महानगरपालिकाले हैजासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चौबीसै घण्टा हटलाइन टेलिफोन सञ्चालनमा ल्याएको छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम पूर्वानुमान गरेर समस्या समाधानमा नागरिकलाई सहज होस् भनेर कामपाले आजदेखि २४ घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरेको हो । नागरिकलाई समस्या परे ११८० नम्बर फोन गरेर जानकारी लिन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले जनाएका छन् । जनस्वास्थ्यको सवालमा कामपाले कुनै […]